Fitaovana 10 hamoronana mockups izay tsy azonao adino | Famoronana an-tserasera
Fitaovana tena ilaina 10 hamoronana mockups
Manuel Ramirez | | Fitaovana famolavolana, dia midika hoe
Hay fomba isan-karazany hidirana amin'ny fitaovana vaovao hanatsarana ny fizotran'ny famoronana prototype mendrika, ankoatry ny zava-misy fa tsy ny olon-drehetra no afaka maka sary an-tsaina tetikasa iray hanome azy farany ny endrika voafaritra.
Ho an'ity dia misy fitaovana isan-karazany mamorona fanesoana ary tariby toy ny ireo 10 izay ho hitanao etsy ambany izay hanampy anao haingana hamolavola sy hitsapana ny tetikasanao vaovao.
3 App Marvel
10 manontany aho
Izany dia amin'ireo fitaovana lehibe indrindra mamorona ny wireframes sy ny mockups voalohany anao. Mora sy tsotra ny mampiasa fanesoana tsara voaomana haingana kokoa noho izay mety hoeritreretin'ny voalohany. Raha tsy ilaina ny fifaneraserana amin'ilay prototype dia io no safidy mety indrindra.
Izy io dia miavaka amin'ny interface iray izay miasa amin'ny alàlan'ny fitaritana sy fitetezana singa mamorona ny fanesoana. Azonao atao ny mizara ny tetik'asa amin'ny hafa ary afaka fotoana fohy dia afaka miala amin'ny fananana tetikasa haingana mankany amin'ny iray ianao izay mety ho vokatra farany.
Ny iray amin'ireo hatsarany dia fidirana amin'ny alàlan'ny sehatra samihafa toy ny PC, finday na tranonkala. Mifanindran-dàlana amin'ny Dropbox izy ary manolotra fidirana amin'ny ekipa iray manontolo. Ny iray amin'ireo mampiavaka azy hafa dia ny ahafahana manondrana ilay prototype toa ny .apk ho an'ny developer Android.
Haingana sy mora ny moqups toa an'i Balsamiq. Ny zava-misy ambanin'ny HTML5 dia mahatonga azy io ho fitaovana haingana Ary tsotra. Marihina fa tsy voafetra ny isan'ireo mpikambana ao amin'ilay tetikasa.
Una fitaovana tsara miaraka amina safidy an-taonina ho an'ny tariby ary eo amin'izany no misongadina ny fahafahan'ny fanovana kisarisary ho lasa tariby tariby nomerika. Ary tsy maka pikantsary fotsiny izany ary dia izay, fa misy ny zavatra rehetra ilainao hanovana ny sary ho nomerika. Tsy fitaovana mora vidy izany fa fanampiana lehibe.
Ny hatsaran-toetra voajanaharin'i Protoshare dia ny fahafahany miasa miaraka amin'ny ekipa. Fitaovana matihanina mamela anao hifanakalo hevitra momba ny tetik'asa rehetra amin'ny fotoana tena izy miaraka amin'ireo mpiara-miasa. Miaraka amin'ny safidy marobe ary fitaovana mazava be ao amin'ny interface tsara, saika manery ny iray hanandrana azy io.
Ny tranokala proto.io dia manana famolavolana tena tsotra ary io no sandany lehibe. Fitaovana sarobidy amin'ny prototyping misy safidy maro ho an'ny iOS, Android, ary Windows Phone.
Fitaovana tonga lafatra pHo an'ireo izay tsy te hijaly be rehefa mifindra sary avy amin'ny taratasy mankany amin'ny nomerika. Safidio ny iray amin'ireo fomba ary ampiasao ny sasany amin'ireo singa hamoronana mockup tsotra ho an'ny iOS.
Wirify manolotra script izay mamadika tranonkala ho lasa wireframe. Tena fanampiana be dia be izany rehefa mahita tranonkala iray misarika ny sainao ianao ary te hampiasa azy io ho fototry ny tetikasanao vaovao.
Azonao ampiasaina ity fitaovana ity manandrama prototypes amin'ny fandefasana rohy mankany amin'ireo mpampiasa ary manomboka manomboka maka angon-drakitra amin'izy ireo.
Ary raha mila fanesoana efa vita ianao, aza hadino ny safidinay mockups kitapo ary karazana parsela hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Fitaovana tena ilaina 10 hamoronana mockups
Misaotra noho ny vaovao dia nanampy ahy be dia be!
Marcia dia hoy izy:
Tena ilaina. MISAOTRA
Mamaly an'i Marcia
Maryolis dia hoy izy:
hace 1 volana
Tsara raha nohazavain’izy ireo tsirairay, izany hoe nanome fanazavana amin’ny antsipiriany momba ireo fitaovana ireo, ny amin’ny fomba ampiasana azy sy ny antony ampiasana azy.
Valio an'i Maryolis
Fanodinkodinana amin'ny haino aman-jery: Ny hosoka tena misy amin'ny Adobe Photoshop
Levitation amin'ny sary: ​​Ny tsiambaratelon'ny montage